Kenya oo shaacisay magacyada afar kamid ah kooxdii geysatey weerarkii Westgate Mall – Radio Daljir
Kenya oo shaacisay magacyada afar kamid ah kooxdii geysatey weerarkii Westgate Mall
Oktoobar 6, 2013 2:33 b 0
Nairobi, Octobe 6, 2013 ?- Dowladda Kenya ayaa shaacisay magacyada 4 nin oo la rumeysan yahay inay qayb ka ahaayeen kooxdii weerartay xaruntii ganacsiga ee Westgate muddo hadda laba todobaad laga joogo.
Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in tirada kooxda weerarkaas qaadday oo horay loogu sheegay inta u dhexeysa 10 ilaa 15 qof, dib laga ogaadey in ay ahayd 4 ilaa 6qof.
Afarta nin ee magacyadooda la shaaciyey ayaa kala ah: Abu Baara Al-suudani, Cumar Nabhaan, Khaddaab Al-kene iyo nin kale oo isaga magaciisa lagu soo koobay Cumeyr.
Afhayeenka ciidamada mileteriga ee Kenya Emmanuel Chirchir ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, in Abu Baara Al-suudaani uu ahaa dagaalyahan khabiir ah, kaasoo asal ahaan kasoo jeeda dalka Suudaan, lana rumeysan yahay in uu hoggaaminayey kooxdii weerartay Westgate Mall.
Cumar Nabhaan ayuu isna sheegay in uu ahaa muwaadin Kenyan ah asal ahaanse Carab ah. Khaddaab Al-kene ayuu sidoo kale afhayeenka militeriga Kenya sheegay in uu ahaa Soomaali xiriir laleh Al-shabaab. Ninka afraad oo lagu magacaabo Cumayr isaga wax faahfaahin ah lagama bixin.
Dhanka kale haweeney 29jir oo lagu magacaabo Samantha Lewthwaite, una dhalatay dalka Ingiriiska, taas oo mar sii horreysey la shaaciyey inay qayb ka ahayd kooxdii qaadday weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee Westgate, ayaa iyadana dib laga ogaadey in aysan weerarkaas ku lug lahayn, sida uu sheegay David Kimaiyo oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliska Kenya.
Samantha Lewthwaite oo laamaha sirdoonka ee Maraykanka, Ingiriiska iyo Kenyaba ay si aad ah u raadinayaan, waxaa qabi jirey mid kamid ah afar nin oo fuliyey weerarro is-miidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada London bishii July ee sanadkii 2005.
Weerarkii lagu qaaday Wastgate Mall -oo ah suuq ay inta badan dadka hodonka ahi ka dukaameystaan kuna yaalla Nairobi- wuxuu bilowday 21-kii bishii lasoo dhaafay ee September isagoo soconayey muddo 4 maalmood ah.
Mas’uuliyadda weerarkaas waxaa sheegtay ururka Al-shabaab oo tilmaamay inuu jawaab u yahay faragelin -ay sheegeen- in ciidamada Kenya ay ku hayaan Soomaaliya, laga soo bilaabo Oct 2011, markaasoo ay militeriga Kenya dhinaca Soomaaliya usoo tallaabeen.
Xilibaanada federaalka ee debeda jira oo lagu amray in ay dalka ku noqdaan 15 cisho gudohood ah
Radio daljir oo qalab isboorti gudoonsiisay qaar kooxaha Isboortiga ee gobolka Galgaduud (Sawirro)